Huru hunyanzvi hwehunyanzvi maficha uye mashandisiro: Nemazuva ano CAD dhizaini nzira, ine yakanakisa hydraulic mashandiro, kugona kwakanyanya uye yakaderera kusakara chiyero Iyo nzira yekuyerera ine hunyanzvi, iyo yekudzivirira-kuvharidzira kuita kwakanaka, kuita kwecavitation kuri pamusoro; Yakasanganiswa chisimbiso uye mechiniki chisimbiso ine anobatsira impeller uye kurongedza zvinogamuchirwa kuona kuti hakuna kuputika kweslurry. Kuvimbika dhizaini kunova nechokwadi chekuti inoreva isina-mhosva yekushanda nguva (MTBF) yemuchina wese yakavandudzwa zvikuru. Shandisa zvisingawanzo mafuta ...
Yepamusoro yekusimudza pombi 300ZGB
Energy okuponesa slurry pump150YZJ
Main hwokugadzira zvinhu uye mafomu: YZJ mhando pombi iri chete padanho, kuroora kubvisa, cantilever chinjikira centrifugal slurry pombi. Iyo pombi inotora yepasi rese yepamusoro solid-emvura maviri-chikamu kuyerera dzidziso, zvinoenderana nesisitimu yekushomeka dhizaini dhizaini, geometry yekutakura kukuya zvinoenderana nepakati kuyerera nyika, kudzikisa eddy yazvino uye kukanganisa kunokonzerwa neiyo yemuno hydraulic kurasikirwa uye pamwe neCheng Shuili kurasikirwa, nekudaro kudzora inobereka mhete kupfeka, yakavandudza iyo hy ...
Energy okuponesa slurry pombi 200YZJ
Main hunyanzvi maficha uye maficha: Y - mhando yemvura pombi yehunyambiri centrifugal slurry pombi, yakanyudzwa mukati memvura, yaishandiswa kutakura hasha, yakakora zvimedu, yakakwira yevasungwa yeslurry. Izvo hazvidi chero shaft chisimbiso uye shaft chisimbiso mvura, uye inogona kushanda zvakajairika pasi pemamiriro ekushaya kukwana. Inoshandiswa zvakanyanya mukuumbiwa kwesimbi, kucherwa, peturu, indasitiri yemakemikari, marasha, simba remagetsi, kutakurwa, kubhururuka kwerwizi, zvekuvakisa uye mainjiniya enjiniya